Turkey inorambidza kunanga nendege kubva kuBangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, uye Sri Lanka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bangladesh Kuputsa Nhau » Turkey inorambidza kunanga nendege kubva kuBangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, uye Sri Lanka
Ministry yeInterior yeTurkey yakaburitsa denderedzwa ichiti nyika yakamisa nendege kubva kuBangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, neSri Lanka kubva muna Chikunguru 1 uye kusvika chimwe chiziviso.
Dzimwe nyika dzakaratidza kukwira kuchangobva kuitika nekuda kwemisiyano mitsva yehutachiona hweCOVID-19.
Turkey yakasarudza kuvhara miganhu yayo kune chero akananga maficha anosanganisira kuburikidza nepasi, mhepo, gungwa kana njanji kubva kunyika nhanhatu.
Vafambi vanosvika kuTurkey kubva kune imwe nyika mushure mekuve mune imwe yenyika idzodzo vanofanirwa kupa yakaipa COVID-19 bvunzo yekuitisa yakaitwa mumaawa ekupedzisira e72.
Zviremera zveTurkey zvakazivisa kuti Turkey iri kumisa nendege dzakananga kubva kunyika nhanhatu pamusoro pechimwe chitsva chemhando dzakasiyana dzehutachiona hweCOVID-19 mumatunhu iwayo.
Bazi iri rakacherekedza kuti nzira yedenda iri mune dzimwe nyika yakaratidza kuwedzera kuchangobva kuitika nekuda kwemisiyano mitsva yehutachiona hweECVID-19.
Kutevera kurudziro yeHutano Hwehutano Teki yakafunga kuvhara miganhu yayo kune chero akananga maficha anosanganisira kuburikidza nepasi, mhepo, gungwa kana njanji kubva kune idzi nyika.
Vafambi vanosvika kuTurkey kubva kune imwe nyika mushure mekunge vari mune imwe yenyika idzi mumazuva gumi nemana apfuura vachadikanwa kuti vape yakaipa COVID-14 bvunzo yekuitisa yakaitwa mumaawa ekupedzisira e19.
Vachaiswawo kwavo vega kunzvimbo dzakatemwa nemagavhuna emuno kwemazuva gumi nemana, panopera muyedzo wakashata uchazodiwa imwezve nguva.
Kana paine bvunzo yakanaka, murwere achachengetwa ari ega, zvinozopera nemhedzisiro yakaipa mumazuva gumi nemana anotevera.
Denderedzwa rebazi rakawedzera kuti vafambi vanosvika kuTurkey kubva kuUK, Iran, Egypt, neSingapore vanozodikanwa kuti vawane mhedzisiro yakaipa yeCOVID-19 yakawanikwa mumazuva matatu apfuura.
Kune vafambi vanosvika kuTurkey kubva kune dzimwe nyika dzisiri Bangladesh, Brazil, South Africa, India, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, UK, Iran, Egypt neSingapore, avo vanogona kupa gwaro rinoratidza kuitiswa kwe COVID-19 mushonga mumazuva gumi nemana apfuura kana kupora kubva kuhutachiona hwe COVID-14 mumwedzi mitanhatu yekupedzisira haizodikanwa kuti uburitse mhedzisiro yekuyedzwa kana kuiswa wega.
Yakashata COVID-19 bvunzo yekuitisa yakaitwa mumaawa ekupedzisira e72 vasati vasvika kuTurkey kana isina kunaka inokurumidza antigen bvunzo yakaitwa mukati marefu maawa makumi mana nemasere mushure mekuuya kwavo ichakwanira kune avo vari kukundikana kupa magwaro.